Waxaan bilaabaynaa mashruuc cusub, oo naqshad cusub leh | Laga soo bilaabo Linux
Akhristayaasha sharafta leh, adeegsadayaasha, wada-hawlgalayaasha iyo tifaftireyaasha Laga soo bilaabo Linux:
Maalintii aan sugeynay ayaa ugu danbeyntii timid waxaanna aad uga hadalnay shabakadaha bulshada.
Maanta waa maalin aad muhiim noogu ah, kaliya maahan inaan bilaabayno naqshad cusub, laakiin sidoo kale waxaan ku raaxeysan doonnaa inaan ku dhawaaqno wax baaxad weyn leh. Warku wuxuu farxi doonaa dad badan, kuwa kalena wuu ka yaabin doonaa waana sida soo socota:
1 Maaddaama Linux ku milmay Aan Isticmaalno Linux.
1.1 Ku saabsan midowga
1.2 Ku saabsan naqshadeynta
1.3 Faahfaahin iyo war
Laga soo bilaabo Linux ku milmay Aynu adeegsanno Linux.
Haa, si fiican bay wax u akhriyaan, Aynu adeegsanno Linux, buuggaas aadka u wanaagsan ee uu sannado badan dayactiray saaxiibkeen iyo hadda saaxiibkeen Pablo Castagnino. Laakiin ha i rumaysan, waad aqrin kartaa bayaanka Pablo shaqsi ahaan ayuu u qoray.
Waana in qofna diidi karin dalab malyuun ah, oo ay kujirto $ 500 sanadkii oo la bixiyo baabuur ganacsi iyo heshiisyo kale oo sir ah U_U
Kaftan. Waxay naga buuxinaysaa sharaf, raynrayn iyo ku qanacsanaanta inaan Pablo ku darno kooxdeena, oo caddeeyay inuu yahay blogger aan caadi ahayn.
Ku saabsan midowga
Waxaa la dhihi karaa tani waa talaabada ugu muhiimsan ee aan qaadnay labadii sano ee aan khadka ku jirnay. Waa maxay isku biirintu? Hagaag, waa wax aad u fudud:
Laga bilaabo waqtigan laga joogo, Pablo wuxuu noqdaa a Maamulaha Rasmiga ah ee boggan (cinwaan looga dhigay maamuus, oo dhegaha lagaga shubo).
Dhammaan qodobbada lagu daabacay Aynu adeegsanno Linux Halkan waad kala tashan kartaa (waxaan ku tusi doonaa sida hadhow).
Xisaabaadka rasmiga ah iyo bulshooyinka shabakadaha bulshada ee Laga soo bilaabo Linux, hadda waxay noqon doonaan kuwa Aynu adeegsanno Linux. Sidaa darteed, tani waxay ka dhigan tahay inaan heli doonno tiro badan oo isticmaaleyaal ah.
Wixii su'aalo ah ee aad ka qabtid ku biirista, waxaad ka turjumi kartaa faallooyinka qoraalkan.
Ku saabsan naqshadeynta
Ka dib markii aan sameeyay wax ka badan 3 jees jees ah, qaabeynta, u diyaari, u fiirso in wax walba ay ahaayeen wax xun, dib u habeyn, dib u naqshadeyn, ka wada hadal isbedelada, wax nagu tuuraan oo aan isku nacno emayllada, waxaan go'aansanay inaan ku ekaano mowduuca ay hadda arkeen iyo in aan cadeeyo: Waxay ku jirtaa beta, maadaama isbeddelo badani soo socdaan.
Waxaan ka soo qaadanay faahfaahinta iyo walxaha mawduuca hadda jira Aynu adeegsanno Linux, isla mar ahaantaana, waxaan ku darnay faahfaahin ku saabsan mawduuceennii hore, waan isku darsannay, midabyo ayaan dhigannay waana tan natiijada.
Way ka sii fiicnaan kartaa? Xaqiiqdii waad qabataa, laakiin i rumee marka aan kuu sheego in tani ay ahayd mawduuca ugu fiican ee aan u qaabeynay oo aan u qorsheynay Laga soo bilaabo Linux ilaa taariikhda.
Dhibaatooyin badan oo ku jira mowduucii hore waa la hagaajiyay, miisaska ayaa la qaabeeyey, isla markaana mawduuca la taageeray oo ku habboon qaabab ka duwan qaraarada:
Iyo taa lidkeed. Haddii qaraarkaagu ka duwan yahay kuwii hore ama midkoodna aanu si sax ah u arkin arrinta, fadlan nala wadaag si aan xal u helno.
Faahfaahin iyo war
Waxaan u maleynayaa isbeddelka ugu weyn ama cusub ee ay tahay inaan muujino waa isbedelka astaanteena. Mashruuc cusub ayaa bilaabmay, sidaa darteedna waxaa lagu soo rogay isbeddel ku dhaca muuqaalkeenna. Sidaad u jeeddo, waxaan bedelnay Hal-ku-dhigga, oo dib ayaan u saxnay faahfaahinta qaar.
Markii hore waan garan karnay Laga soo bilaabo Linux adoo adeegsanaya astaamaha soo socda: <°. Hadda, waxaan isticmaali karnaa: <°, <«, hadba kii aad doorbido.
Markaan la kulanno maqaal horey loogu daabacay Aynu adeegsanno Linux, waxaan ku baran doonnaa laba shay:
Sababtoo ah qaabka qoraalka Pablo (dabcan).
Wixii aag inoo sheegi doona in maqaalku ka yimid Aynu adeegsanno Linux (fiiri sawirka soo socda)
Liiskayaga ugu muhiimsan ayaa koray. Adeegyada caadiga ah ka sokow, waxaan ku darnaa bogag kale oo aan ka dhaxalnay Aynu adeegsanno Linux kaas oo ka kooban macluumaad aad u fiican oo loogu talagalay isticmaaleyaasha cusub.
Waxaad awoodi doontaa inaad dareento isbeddelada kale ee daboolka, iyo naqshadeynta guud ahaan. Waxaan ka tagnay qaar ka mid ah astaamaha aadka loo codsaday ee adeegsadayaasha, sida muujinta qeybinta aan isticmaaleyno, laakiin ha ka welwelin, tani mar kale ayey dib u noqon doontaa mar dhow Sikastaba, faallooyinka wali wey leeyihiin shaqadan.
Waxaan cusbooneysiinay Tilmaamaha wada-hawlgalayaasha, sidaa darteed qofkasta oo raba inuu kaqaybqaato wuu ogaan doonaa sida loo sameeyo.
Ma doonayo inaan dhammeeyo adigoon uga mahadcelinin AlainTM caawimaadda nafsad ahaanta ah ee la bixiyo ee ku saabsan barnaamijka mowduuca
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Waxaan bilaabeynaa mashruuc cusub, oo leh naqshad cusub
175 faallooyin, ka tag taada
Waxaan sifiican ugu hambalyeeynayaa mashruuca cusub ee aad gacanta ku heyso, labo ka mid ah kuwii waaweynaa ee isku darsamay… tani waxay umuuqataa mid aad u wanaagsan !!
Guul iyo nasiib badan !! 😀
Waa ansax in lagu celiyo, waxaas oo dhami wali waxay ku jiraan marxaladii tijaabada, wali maynaan dhamayn u guuritaankii nuxurka Pablo nuxurka UsemosLinux, mawduuca wali waxoogaa horumar ah ayaa ka dhiman oo wax walba ka sii sareeya, waxaan sugeynaa FeedBack oo adiga, akhristayaashayada ah, aad na siisaan 🙂
Kaliya waxaan dhihi karaa ... Ku soo dhowow cusub FromLinux 😀
Waa maxay KZKG? Akhrinta wararka ku jira Aan Isticmaalno Linux Waan sii fikiray, waxaan u maleynayaa in furaha uu yahay in la xasuusto erayga Kazekage.
Maaha wax adag sida Bawlos yidhi.
KZKG macnaheedu waa sida saxda ah, KaZeKaGe, taasi waa, waxay yihiin shibbanayaal 🙂
Qofka aan arkin anime-yaashaas waxaan u malaynayaa inay adag tahay haha ​​😀
Waad salaaman tihiin kooxda oo dhan, marka hore, waxaan idinku hambalyeynayaa dhamaantiin shaqadan weyn ee aad qabanaysaan iyo inaad dhamaantiin aqoontiina la wadaageysaan dhamaanteen, kuweena doonaya inay waxbadan ka bartaan barnaamijkan bilaashka ah ee bilaashka ah maalin kasta hal mar isku day oo aad ogaato inaysan dib u laabanayn, waxaad ku caashaqday dhammaan awooda weyn ee aad ku horumarin karto OS-kan weyn ee ah Linux.
Markaa soo jeedin ahaan waxaan jeclaan lahaa in haddii ay suurta gal tahay aad kobcin karto koorso Linux ah guud ahaan kuwa bilowga ah oo aan ahayn sidaas bilowgayaasha, waxaan u maleynayaa inay noqon laheyd jawharad taaj in lagu dhammeeyo Pad-kan weyn.
Iyadoo aan la helin habsiinta qof kasta oo ka yimid Isbaanish, Tarragona waxaan kuu rajeynayaa nasiib wacan halkaana waxaad ku leedahay mid kale oo raacsan mid kasta oo ka mid ah qoraaladaada iyo maqaalladaada.
Anigu waxaan ahay mid raacsan labada baloog runtiina ma jecli isku biiritaanka aad iyo aad now maxaa yeelay maalmahan way adagtahay in la helo nuxur kala duwan taasina waa wax labada blog ay si gooni gooni ah iigu soo bandhigeen, laakiin hadii wax waliba isbadalaan sifiican , hamigeyga kuugu fiican.
Fikradda ayaa ah in lagu bixiyo isku mid ah waxyaabaha la midaysan yahay, dhammaantoodna hal meel 🙂
Hagaag, naqshada cusubi waxbadan ayey iga dhaadhicineysaa, tii hore sifiican ugama shaqeyn.
Waxaan kuugu hambalyeynayaa isku biiritaanka, ha noqdo mid dheer oo barwaaqo ah 😉
Hambalyo !!!, laba bog oo wadatashi joogto ah, laga bilaabo Argentina !!!
Weyn! Avatar sare! 🙂
aad u fiican qaabkeeda. Anigu waxaan ahaa taageere desdelinux ku dhowaad markii aan dhashay, oo nuxurku wuxuu u muuqdaa mid aan macquul ahayn, ma jiro fanboyism of distros ama barnaamij. Waa waxa aan ugu jeclahay halkan 😀
Labadaydii bog ee aan jeclaa ayaa midoobay ???? Kaliya waxaan ubaahanahay xaaskeyga inay ii sheegto inay uur leedahay si ay maalinta u ifiso. XDDDD
Kaftanka dhinac, waxay umuuqataa tallaabo weyn. Waxaan rajeynayaa inay kaliya keeneyso guul iyo maqaallo intaa ka sii fiican. Hambalyo!
Waad ku mahadsan tahay dhiirigelinta!
Waan jeclahay naqshada cusub. Waxaan rajeyneynaa ku biiritaanka maaddada kama sii xumaaneyso. Waan jeclahay balooggan maxaa yeelay wuxuu leeyahay taabasho asal ah. Waxayba u egtahay inuu lahadlayo basaska nolosha oo dhan.
Isku biirid balaaran, waxaan kusii wadaa labada goobood waxaanan rajaynayaa inay dhamaantood sifiican uqabtaan safarkan cusub ee hubaal u horseedi doona goob aad uga awood badan aduunka GNU / Linux.
Waxaan ku arkay wararka ku jira Aan Isticmaalno Linux, runtiina waxay umuuqataa wax aad u wanaagsan oo awood u leh goobta. Hambalyo 😉
Ma jecli naqshaddan hurdiga ah ee xD
Aniga ahaan, waxay kudartay shaqsiyaad badan goobta.
OO aan ereyo lahayn.
Anaguna waxaan aadeynaa inbadan ... 🙂
Aad u fiican! Labadaba waan la socdaa runtiina waan ka helay mawduucan cusub. Waxaan rajeynayaa in wax walba ay aadaan 101% 🙂
Ku jawaab Yopi
Alla hoogay, maxaa garaacis ah! Waan jeclahay sida aad ugu soo biirtay baloogyada waqti aad u gaaban, dhab ahaan, ma sugi karo inaan arko sida ay wax u socdaan 😀
Salaan balaaran, lineeros !!
Mahadsanid! Waxaan rajeyneynaa in aan dhameystirno tahriibka maalmaha soo socda.
iyo Xe dijo
Jawaab suulka Xe
Bulshada DesdeLinux miyaa looga tagay adeegsiga bulshada UsemosLinux wixii hada ka dambeeya?
Hadaad ula jeedo bulshada G +, haa.
Waxaa la mid ah shabakadaha kale ee bulshada, oo ay ku jiraan RSS.
Cajiib ah !!! Laba weyn baa isu yimid !!! Waxa aan ugu jeclahay waa penguin ka Home Home
Ku jawaab tuxmerlin
Ugu horreyntii, isbeddelka naqshadeynta waa taabasho aad u fiican, labadaba aragtida iyo qaabeynta mawduucyada.
Ta labaad, laakiin uguyaraan, tan kasoo horjeedkeeda, waxaan aaminsanahay in xalka ugu fiican la doortay, in Pablo uu fursad u haysto inuu kusii socdo la qabsiga isbeddelada noloshiisa shaqsi oo uusan si buuxda uga laaban la shaqeynta maqaalkiisa.
Dhab ahaan, si aad u wanaagsan ayaa loo yidhi.
Waxaan kuugu hambalyeynayaa isku biiritaanka soo baxay. Xaqiiqdii, isbeddelkani waa mid aad ufiican maxaa yeelay runti waxay iga dhigeysaa inaan aqoonsado mid ama qayb kale oo ka mid ah baloogga, marka lagu daro waxaan rajeynayaa inay i siin doonaan boos dhexdhexaadiye ama tifaftire si aan awood ugu yeesho in aan dhexdhexaad ka noqdo faallooyinka qaar ee ka imanaya trolls-ka maamul noqo maxaa yeelay shaqadooda waxay sameynayaan waxyaabo yaab leh).
Waxay iga tageen anigoo afka furaya, runtu waxay ahayd war aanan filayn. Aynu adeegsanno Linux waxay ahayd bilowgeygii Linux oo ay weheliso balooggan isha ugu weyn ee macluumaadka iyo tixraaca caadiga ah, sida iska cad waxay ka mid ahayd ilihii ugu horreeyay ee RSS ee aan dib u eegay. Hada Pablo waa halkaan, waxaan u soo dhaweynayaa soo dhaweyn balaaran, waxaan rajeynayaa in midowgan dadaalada ay u saamaxeyso inuu si weyn u fududeeyo culeyska howlaha maamulka sida uu horeyba ugu soo sheegay mar uun barta uu ku leeyahay iyo inuu awoodo inuu diirada saaro maqaaladiisa ! Markale soo dhawow!
PS: Wixii aan u arko waxa ka dhiman waa arrimo la taaban karo, laakiin wixii aan ka aqriyay maqaalka Pablo, domainku wuxuu ahaan doonaa sidiisa oo kale arinta lacag bixinta, laakiin ma laga fiirsan doonaa mustaqbalka in la beddelo? Arinta beelaha G +, maxaad qorsheyneysaa inaad sameyso? Beesha <º Linux miyaa ku biiri doonta bulshada aan isticmaalno Linux?
Eeg, si aan ku siiyo jawaab gaaban:
Dhammaan kuwa doonaya inay raacaan qoraalada DesdeLinux waa inay joojiyaan raacitaanka shabakadaha bulshada ee DesdeLinux oo ay u beddelaan shabakadaha bulshada ee UsemosLinux (kuwaas oo ah kuwa ka muuqda dhinaca cusub ee balooggan - eeg dhinaca midig sare). Tan waxaa ka mid ah: RSS, Twitter, Facebook, iyo Google+ (oo ay ku jiraan bulshada).
Sida ugu fudud ee.
Nasiib wanaag waxaan toos u booqdaa bogga.
Hagaag, waan jeclahay naqshadda cusub .. Iyo sidii aan horayba ugu sheegay Aynu Isticmaalno Linux, way igu qanacdaa markaan arko labada bog ee aan ku soo noqnoqdo inta badan ..
Fusion 2.0 !!! waaw .. !!
Maxaa xigay ??
Abuur distro kuu gaar ah? (sida ku dhacday ubuntucosillas, hadda lmde cosillas taasna waxay horey u leedahay LMDE u gaar ah)
Yaa og? Malaha maalin Kuubaanka ah ayaa adduunka xukumi doona .. !! (ama uguyaraan dunida Linux) hehehehe… !!
<º "Laga bilaabo Hada Aan Isticmaalno Linux
Hambalyo ka timid Mexico.
habka, qaraarka 1024 × 768 menu wuxuu umuuqdaa taleefanka gacanta.
Waad ku mahadsantahay faallooyinka.
Ii soo dir shaashad shaashadda kzkggaara [at] oo ka timaadda shabakadda Linux (dot) si aan dib ugu eego.
Runtii waxaan isticmaalaa 1024 × 768 mana arko wax yaab leh ^ - ^
Si fiican ayaan u arkaa dhib kuma qabo isticmaalka Firefox + Winbugs
Labada warar ee la rumeysan karo, naqshadeynta waa weyn tahay iskudhafkuna wadnaha buuxiyo farxad Ha noolaado Linux oo aan isticmaalno Linux.
Ku jawaab Roberto Salazar
Goobtu aad ayey ugu fiicnayd iyaga, ku biiriddu waxay hubaal ka dhigaysaa waxyaabo cusub iyo naqshad cusub, in kasta oo ay weli ka maqan tahay mid la safeeyey, haddana way fiicnaayeen.
Aniga ahaan, waxay ahayd mid aad u fiican. Sidoo kale, waxaan rajeynayaa inay ku daraan Muqaal Muuqaal ah oo ay iska cadahay inuu noqon doono mid soo jiidasho badan.
weyn labadayda blog ee aan ugu jeclahay hal.
By the way, waan ilaaway inaan ku idhaahdo faaladayda, runtii waan ka helay naqshadaynta cusub ee baloogga, iyo sidoo kale is dhexgalka ku jira kooxda dhinaca shabakadaha bulshada (sidii ay ahayd In Aan Isticmaalno Linux) iyo xagga hoose ee bogga, in kasta oo laga yaabo inay taasi tahay Waxay noqon lahayd talo in aan ka sameeyo labada "Tweets-kii ugu dambeeyay" iyo "Facebook" qaybaha sidoo kale dhinaca kooxda.
Ku hay Argentina! Anigu waxaan ahay mid raacsan labadaba, hal su'aal Ka waran quudinta RSS?
UsemosLinux rss ayaa loo isticmaalaa
Maxaa layaab leh isku darkaan, habka aan ujeclahay naqshadeynta !!!!
Ku jawaab wildsidde
«Markii hore waxaan garan karnaa FromLinux iyadoo la adeegsanayo astaamaha soo socda:
<°. Hadda, waxaan isticmaali karnaa: <°, <”, kaad doonto oo aad doorbideyso."
Wayna ku samayn karaan
Hadana, HAMBALYO ku saabsan midowga, dhamaanteen waan guuleysaneynaa !!!
Waan jeclahay midowgan, laakiin waxay umuuqataa inay jiraan waxyaabo badan oo ku saabsan Aynu Isticmaalno Linux marka loo eego FromLinux, waxay igu dhibaysaa shabakadaha bulshada, muxuu UsemosLinux kaliya u waayi la'yahay? Maxay u sameeyeen r
Wadada kale ee wareegsan? Way iga goosatay
Waxaan u maleynayaa inay tahay sababtoo ah shabakadaha bulshada, UsemosLinux waxay leedahay isticmaaleyaal badan.
Dhab ahaan, waa inaad u tagtaa ficil ahaan.
Labadayda Blogga ah ee Loogu jecelyahay Linux Kusoo Biir Ciidamada 🙂
Waxaad horeyba u ogayd in "gabi ahaanba ay ka badan yihiin wadarta qaybaha", sidaa darteed akhristayaashaada waxay filayaan natiijo ka timid hal-abuurnimo ka weyn tii ay ahaan lahaayeen inay gooni gooni u ahaadaan oo waxaan si gooni ah u aqrinnaa qoraalladooda 😉
Hagaag, horay ayaan uga tagay faalladayda UsemosLinux oo hadda, halkan taab.
Marka ugu horeysa, waxaan u maleynayaa in kani yahay go'aankii ugu weynaa ee kooxeed ee aanan wax lug ah ku lahayn, taas oo xoogaa murugo igu abuureysa maxaa yeelay waxaan arkay mashruuca oo koraya waana ka shaqeeyey ku dhowaad bilowgii (ilaa 3 ama 4 bilood oo noloshayda ah, waxaan u malaynayaa) dhawaanahanna waxay igu kalliftay bool iyo badh in aan wakhtigeyga la qabsado (runti hadda god baan sameeyaa maxaa yeelay ilaa qoorteyda ayaan gaadhayaa) Maxaa u diidayaa? Waxaan u xiisay labada isqaba ee kuwan oo marba marka ka dambaysa ku raaxaysta.
BTW, taasi waxba kama qaado, Pablo horeyba waan kuugula hadlay boostada iyo in kabadan gacanteyda oo aanan fidin karin, isbarto? Waxaan u maleynayaa inaan horey u galnay wax ka badan hal jeer, si kastaba, mar kale, mar kale, Nano, kan loo yaqaan «khaldan» oo loogu yeero dadka kale «darawalka webshow-ka ugu khaldan ee luuqadda Isbaanishka ah ... ... Adigu waxaad tahay maamul, booskaas waxaa loo daayay qof jimicsi ku sameyn kara sidaas oo kale oo aniga haloo sameeyo waxa aan ku fiicanahay, BOFH, tifaftiraha guud, OrtoNazi, firewall xD tayo leh
Si dhab ah wiilal, waan ku jeclahay, aan aragno sida aan hadda u gaarnay ... maqnaashaha maahan xil ka qaadis, ama bixitaan.
Waxaan rajeynayaa inaan helo jagada tifaftiraha, maadaama weydiisashada jagada maamulka ay aad u weydiisaneyso. Waxaan rajeynayaa in hadhow ay ka guuri doonaan WordPress-ka una wareegi doonaan Drupal si barxaddu u noqoto mid deg deg badan, ka xoog badan oo safka hore kaga jirta websaydhada gaarka ah.
Labadayda bog ee aan jeclahay mid bay ku midoobeen. Aad u fiican!
Xoojinta xiriirka Argentina iyo Cuba 🙂
Ma aanan aqoonin agagaarka halkan, waan jeclahay. Ragga xoogga ah, waxaad sameyneysaa wax qiimo weyn leh.
Cajiib! Cajiib! Cajiib!
Labada goobood ee maalin walba waa in la-arko, wax kasta oo ay tahay inaad sameyso, waa la midoobay! Waa war miisaan culus leh!
Hagaag, maxaa kafiican, waxaan hubaa in fikradu tahay in lasiiyo sii wadid iyo nuxur kafiican mawduuca ina kulmaya.
Rajada ugu wanaagsan kahor, mawduuca ayaa umuuqda mid wanaagsan!
Waxaan kuugu hambalyeynayaa dhammaan isbeddelada, waxaad u egtahay mid fiican.
Si aan runta u sheego, waxaan la yaabay isbeddelka lama filaanka ah ee boggan ku dhacay si ka wanaagsan, maaddaama muuqaalka muuqaalka si wanaagsan loo qabtay, runtiina way ka raalli tahay isha marka loo eego mowduucii hore (iyo inaan u maleeyo inaan dhib soo maray markii aad ku arkaysay boggan gudaha Chromium).
Dhanka kale, waxaan jeclahay go'aankan cusub ee ay gaareen kooxda DesdeLinux, marka waxaan rajeynayaa in hadhow ay ka guuri doonaan WordPress una tagayaan Drupal, in kasta oo aan horeyba u diyaarinay inaan maareeyo boggaga bartaas oo aan ku furo boggeyga CMS kaas ( maya waan necbahay WordPress, laakiin Drupal waxaan dareemayaa inaan waxbadan ka bartay WP).
Sikastaba, hadaad rabto, waxaad iigu tixgelin kartaa tafatire iyo / ama dhexdhexaadiye (hadda, ma jiro maamule), ka sokoow inaad adeegsan karto # IRC sida ugu macquulsan.
Kahor Chromium-ka waxaad u muuqatay wax xun? O_O
HAHAHAHAHAHAHAHA, Uma maleynayo inaan ka fikireyno inaan ka tagno WordPress-ka waqtigan, mana ahan inay tahay CMS-ga ugu fiican, laakiin dhowr raaxo awgeed ayay na siisaa, waxaa jira sababo badan oo aan u isticmaalno WP 🙂
Marka laga hadlayo noqoshada tifaftiraha, waxaa jira isbadalo dhowr ah oo aan sameyn doono oo laxiriira darajooyinka iyo mudnaanta hada, laakiin hada waxaan aad ugu mashquulsan nahay howlaha kale ee dhiqlaha, hagaajinta iyo u guuritaanka waxyaabaha ka imaanayo UL ilaa DL sidaa darteed darajooyinku waa inay sugaan in yar 😉
Waad ku mahadsantahay faalladaada, saaxiib
Ka tag WordPress? Pfff, waxaan doorbidi lahaa isticmaalka Windows kahor inta aysan dhicin. Oh sug ...
Maaha in la is muujiyo, laakiin WordPress waa mid aad u daal badan si loo saxo cayayaanka mawduucyada marka la barbar dhigo Drupal. Intaa waxaa sii dheer, raaxada ay Drupal siiso WordPress ee EyeCandy waxay cabsi gelin doontaa xitaa kuwa cusub, laakiin waxaan la qabsanayaa jawigaas sababtoo ah sida ugu fudud ee ay u maamusho mawduucyada heerka koodhka, laakiin waxaan isku dayayaa inaan aad u barto sida loo isticmaalo Drush si otomaatig ah u cusbooneysii boggeygu inaanu kala bixin marka aan martigelinayo.
Kama doodi doono mawduucan maxaa yeelay qof kastaa wuxuu leeyahay ra'yigiisa, laakiin run ahaantii ma ka fudud tahay in la abuuro mawduuc loogu talagalay Drupal marka loo eego WordPress? Fadlan i tus.
Haye, waxaan helay heesta cusub oo la yaab leh, waxaanan arkaa inay isku milmeen. Hagaag, si aad u wanaagsan, waa wax aad uga badan go'aanka aadka u fiican.
Waxaan kuugu hambalyeynayaa isku biiritaanka iyo dib u habeynta!
Runtii waan jeclahay sawirka cusub ... laakiin penguin-kaas oo amraya bilowga wuxuu umuuqdaa digir sanduuqa Corn Flakes. Waa waxa kaliya ee igu kallifaya inaan boodo, haddii kale wax waliba aad ayey u fiican yihiin.
HAHAHAHAHAHA penguinkaas runti wuu fiicnaa, waana sababta aan u dhigno LOL !!!
Haddii aad taqaanid ama aad leedahay qof kale oo ah SVG ama PNG (laakiin leh tayo leh), ii soo sheeg know
Oo waad aragtaa ... kani, kani waa nooca isbeddelka ee aan kuu sheegayey wakhti yar ka hor 😀
LOL…! Maqaaryo! Maaha inaan necbahay penguin, kaliya uma arko inaan u dhigmayo qaabka sawirka cusub ...
Isbedelada waxay umuuqdaan kuwo aad ufiican, waxayna ila tahay aniga, isku biiritaanka labada baloogyo waxay kadhignaan doontaa duulimaad rasmi ah tayada maaddada, waxaan u maleynayaa in isbahaysigani uu sifiican u bixin doono.
Tani waa wax fiican !!! Waxaan ugu hambalyeynayaa Pablo ku biirista DesdeLinux OwO
Waxaan rabaa in aan cadeeyo in waxa aan ugu jeclaa usemoslinux ay ahayd furfurnaanshaha bulshada iyo casuumaada wax wadaagga iyo kaqeybgalka, taas ayaa aniga iiga muhiimsan wax walboo kale, maamulayaasha iyo la shaqeeystayaasha, hambalyo wiilasha.
Iyadoo 500,000 kun oo doolar sanadkii iyo gaari ganacsi, xitaa waan kugu biiri lahaa, hehehe, salaan, waan ku faraxsanahay warka. Sii wad, waan ogahay in tani ay ka sii fiicnaan doonto.
Jawaab Cesar Leon
Anigu waxaan ahay aqriste labada bog midna kani waa war fiican.
Guullo badan oo marxaladan cusub ah =)
Waxaan rajeynayaa inaad sifiican ugudambayn doonto marxaladan cusub.
Waan jeclahay naqshada cusub ee bogga.
Hambalyo !!! Waan hubaa inay fiicnaan doonto.
Waxaan si fudud ujeclahay naqshad cusub: 3 hanbalyo badan iyo habka, daabac casharradaada si aad uga dhigto mid aad ufiican. waa
Weyn! Ma haysto ereyo aan ku sifeeyo… Si fudud u qurux badan hahaha 🙂 Hambalyo dadka
Labada baloog ee ku saabsan Linux ee Isbaanishka ee aan raaco tan iyo markii aan ku dhowaad bilaabay isticmaalka Linux oo ay isu yimaadaan!
OM OSOM * - *
Hambalyo !!! Waa war wanaagsan !!
Ahem ... Goormaad sii deyneysaa heesta cusub? Waan jeclahay !! hehehe
Hehehe .. tartiib tartiib. Mawduuca ma aha 100% safeeyey. 😉
Nicolas Gabbo dijo
Hambalyo !! Bogagga 2 ee aan maalin walba wada akhriyo, tani waa hubaal inay fiicnaan doonto!
Jawaab Nicolás Gabbo
Waxaan imid gurigeyga 23:30 pm, waxaan kasoo galayaa Linux, muuqaal cusub iyo war lama filaan ah. Waxaan si daacad ah u moodayay inay tahay nooc kaftan ah. Waxaan hubiyaa quudinta Aynu Isticmaalno Linux waxaanna ka helaa qoraallo ka socda Linux. Yaab weyn. Inta badan, guul badan!
Waxa kale oo aan aad u jeclaystay naqshadaynta, gaar ahaan xaqiiqda ah in asalku aanu ahayn mid cad oo dhammaystiran, isha ugu roon, sidaa darteed iyagu ma dilayaan indhahayga
HAHAHAHAHA nooc kaftan ah? OL LOL!
Waxaan ka shaqeyneynay arintaan muddo dheer, waa wax lagu farxo in ugu dambeyntiina aan jebinno wararka 🙂
Laga soo bilaabo Linux iyo Usemos Linux, tixraacyo qasab ah oo loogu talagalay dhammaan isticmaaleyaasha Linux ee ku hadla Isbaanishka. Haatan horay ayey u wada socdaan, hambalyo kal iyo laab ah.
Waad ku mahadsantahay faalladaada 😀
Hambalyo isku biiritaanka !!!
Sida naqshadeynta cusub, ma jecli in labada tiir ay soo baxaan. Way sii adkaaneysaa in la ogaado nidaamka taariikh ahaaneed ee qoraallada.
Ku jawaab escorponox
Mawduucani maahan kii ugu dambeeyay ama kama dambaysta ah, wali waxaa jira xoogaa hagaajin ah oo la doonayo in la sameeyo, aan dhahno waa kaliya 70% ... markaan u qaadano 100% waxaad arki doontaa sida ay ugu raaxeysaneyso in la ogaado qoraalada laga keenay maanta, kuwii shalay, iwm 😉
Xaqiiqdii, waxaa jiri doona wax ka badan 2 tiirar, wax walbana way fiicnaan doonaan ... laakiin taasi wali waa maqan tahay.
Waa salaamantihiin. Waxaan kuu sheegayaa in aan ahay mid raacsan labada bog, labadaba xisaabtooda Facebook iyo e-mayl, waana ku hanbalyeynayaa iyaga, maxaa yeelay labaduba waa baloogyo aad u fiican oo wax badan iga caawiyey ku soo biiriddii dunida SWL. Waxaa jira hal shay oo kaliya oo aan jeclaan lahaa inaan cadeeyo, goorma ayey isku milmayaan, macnahedu waa inaan iska qorto si aan usii wado helitaanka emaylka?
Salaan iyo soo dhawow.
Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga, dhammaan isbeddelada aan sameyno had iyo jeer waa kuwo wanaagsan better
Barxadda dhinaceeda (baarka midigta ku yaal) ayaa ah xiriiriyeyaasha si aad isugu qorto, waad nagala socon kartaa RSS ama waxaad ka heli kartaa qoraalada ku yaal email ????
Horey ayaan usheegay sababta maqaalada DesdeLinux uga muuqatay quudinta Aynu Isticmaalno Linux XD
Waa hagaag waxba, ka dib ku soo dhawow Pablo bulshada.
Waxaan dareemayaa in champagne uu meel walba roob ku daadin doono caawa: D.
Hambalyo niman yahow 😀
WAAN IDIIN RAJAYNAA INTA UGU FIICAN AY KU JIRTO TAHRIIBKAN cusub
Raaca labada beelood.
Mid ka mid ah wararkii iigu fiicnaa bishan
Waan jeclahay midowga 2-da bog ee cajiibka ah.
Hore u soco!
War aad u wanaagsan, iyo waxyaabo badan oo dheeraad ah oo ku saabsan baloogga.
Markaan arko sida aad uxakameyso naqshadaha, kaliya waxaan u maleynayaa inay jiraan dad lacag ka qaata sameynta waxyaalahaas oo kale oo xitaa aysan gaarin kabaha kabahaaga, waxaad leedahay heer badan.
Hagaag, hadaad taqaano qof raba inuu naqshadeeyo & barnaamij u sameeyo mowduuc, goob dhameystiran ama baloog, codsi websaydh ah ... wax la mid ah, waanu mahadnaqaynaa daa'in haddii aad noo sheegto Waxaan had iyo jeer isku daynaa inaan lacag ururinno si aan u awoodno inaan ku bixinno martigelinta.
Waad ku mahadsantahay faallooyinka 🙂
Waxaan kuugu hambalyeynayaa isku biiritaanka iyo qaabeynta cusub, waxay umuuqataa wax weyn!
(kuligood) ha dhunkadaan, ha dhunkadaan !!!!
noloshu qaadaa dijo
Waan idiinku hambalyeynayaa niman yahow… boggu waa mid heer sare ah.
Blog Jirid !!!. Waxaan u hambalyeynayaa DHAMMAAN kooxdii ka shaqeysay sidii midowgu u rumoobi lahaa.
Baro! Hambalyo! In kasta oo dadka qaarkiis ay u muuqato inay qalad tahay, maxaa yeelay sida kaliya ee ruuxaas loogu noolaan karo labada baloogyo waa in la mideeyo xoogagga, in kasta oo aan ka qoomameynayo in meesha laga saaro gelitaanka RSS ee Thunderbird -ga 🙁 Hambalyo Alejo, Ernesto, Pablo, iwm.
Dhamaantiin waad mahadsan tihiin. Iskudhafkaani wuxuu kaliya keenayaa waxyaabo badan oo wanaagsan, maaddaama aan isku dareyno qaabka Pablo iyo maqaalkiisa wanaagsan ee kuweenna.
Dhamaantiin waad ku mahadsan tihiin faallooyinkiina iyo ra'yi dhiibashadaadii fiicnayd. Hadda waxa kaliya ee haray waa in la sii caddeeyo maadada, si guul leh loogu dhammeeyo soo haajirida maqaallada Aan Isticmaalno Linux iyo dabcan, in la sii wado bixinta maqaallo tayo leh.
Ka badbaado dijo
Waxaan kuugu hambalyeynayaa naqshadda cusub iyo isku biirinta labada baloog, hadda waxay noqdeen wax aad uga weyn oo aad muhiim u ah, marwalba waan kula socdaa waana ku faraxsanahay akhrinta warkan, halkan waxaan ku sugi doonaa qoraaladaada sida had iyo jeer
Mamonazos, fiyuusku wuxuu ahaa iskudhafka iskudhafka wuxuu lahaa 2 aqrin oo hada kaliya hal.
Inaad tahay geeso badan oo aadan TV haysan?
Midkoodna 720p ama 1280 x 720 ama 1080p 1920 x 1080 midna, laakiin hadday iyaguna yihiin kuwa ugu caansan kombuyuutarrada casriga ah, u fiirso inaad dhif tahay
Lagu sheegay bilaa macno, hambalyo, ha fiicnaato oo xusuusnow inay jiraan 16: 9 shaashadood oo leh go'aanno 720p iyo 1080p ah iyo inay yihiin kuwa ugu fiican iibiyaasha.
Ma dabooli karno wax walba. Markii hore waxaan sameynay hagaajinta sida ku xusan darajooyinka qaraarada ee Google Analytics ay na siiso. Tan waxaa loo sixi doonaa si tartiib tartiib ah.
Hagaag, wax waa inuu ku qaldan yahay gorfaynta 1080p iyo 720p sidoo kale waa ku badan yihiin aaladaha moobaylka.
Wax xun ma ahaan doontid in lagu daro qalabka wax lagu baaro ee loo yaqaan 'DM detector' iyo qaraarrada ku xigta Browser iyo distro, anigaa iska leh
Haddii aad dhibaatooyin ku qabtid xallinta kasta, qaado shaashad oo igu soo dir kzkggaara [at] kana soo qaado netka Linux [dot]
Jidka ... nuugayaasha? ¬_¬
Naqshadeynta cusubi way fiicantahay, waxay muujineysaa in labada bogba ay midoobeen, waxayna siinaysaa codka diiran ee barta kale leedahay. Labadiinaba waan kugu hanbalyeeynayaa go aanka aad qaadatay! warkaan waa mid aad uxiiso badan
Aad baad ugu mahadsantahay faallada 🙂
Waan hilmaamay talo soo jeedin
G + waxaad ka abuuri kartaa BULSHO halka lagudaabacayo daabacaadda maqaallada, mowduucyo kale oo sidoo kale kugu dhiirrigalin kara laguu qori lahaa.
In kayar 1000 xubnood bulshada Manjaro Linux ee Isbaanishka ku fiican
Kuwa 15.000 ee raacsan, qiyaastii 1000 ama 2000 oo aan saxiixno ayaa ka dhigi doonta mid soo jiidasho leh, iyo ogeysiisyada ayaa ka khuseeya - dhammaan daabacaadaha cusubi waxay ka muuqdaan aagga ogeysiisyada koox koox iyadoo aan wax dhib ah laga qabin - shaqsiyan waan kuu aqriyay hadda anigoo quudin kugu haysto G + -
Laga soo bilaabo beelaha, marka lagu daro, waxaad u dhowdahay inaad gujiso xiriiriyaha haddii aad xiiseyneyso gelitaanka iyo RSS-ka ma lihid
War weyn !!! Iyagu waa labada baloog ee aan raaco inta badan marka laga reebo Muuqaalka nuqul.
Mawduuc aad u fiican, oo casri ah. Guul baan kuu rajeynayaa.
Naqshadeynta waa wax laga naxo, waxay umuuqataa Metro UI-ga Linux
Ku jawaab ANXO
Hadda wax kasta oo fidsan oo midabbo leh waa METRO? Uff, wax badan ha dhihin, waaba intaas oo Microsoft ay fikradda soo bandhigto.
Iyagu waa kuwo karti leh, caqliga yar ee ay leeyihiin waxay odhan doonaan waxay soo heleen midabada
Iyo mid kale ... faallooyinka Disqus ama xitaa kuwa G + waa kuwa aad ugu raaxeysan in kuwan la dhaliyay, waxaad ogaan kartaa saaxiibo saaxiibtinimo oo xiiso leh, in haddii aan jeclahay aqoonsiga la hagaajiyay in kastoo Manjaro-keyga uusan weli aqoonsan
Waxa aanan ka jeclayn Disqus ayaa ah in faallooyinka markaa aysan ku jiri laheyn DB-ka goobta, marka… markay tahay sameynta keyd, ka shaqeynta gudaha, tijaabinta, ma isticmaali karno faallooyinka (ugu yaraan ma ahan a hab fudud).
Waxaan doorbidi lahayn inaan sii wadno hagaajinta nidaamka jawaab celinta ee noo gaarka ah, ugu yaraan sidaas ayaan qabaa.
Marka laga hadlayo xaqiiqda ah in Manjaro uusan ku aqoonsanayn, shaqsiyan waan taageeray, waa ku filan tahay in Chromium / Chrome ay muujiso inay taasi tahay distro, waxaan qiyaasayaa inaad u baahan tahay inaad wax ka beddesho UserAgent.
Hambalyo iyo bogaadin!
Waxaan raacay labada qoraal sidaa darteed hada waxaan uhelayaa raaxo badan :).
Codsi: ma ku dari kartaa Disqus nidaamka faallooyinkaaga?
Shakhsi ahaan, waxaan doorbidaa inaan kusii hayo nidaamka faallooyinka hal meel, taas oo ah, inaanan ku tiirsanaanin kuwa kale, in wax walba ay isku mid yihiin DB, si kastaba ha noqotee waa inaad aragtaa waxa Pablo iyo Elav u maleynayaan.
Iyo sidoo kale Disqus ee shabakadaha gaabiska ah waa wax aad u xun.
Waxaan u maleynayaa sababta ay dad badani ugu taliyaan Disqus inay tahay iyadoo ay ka sahlan tahay in lala socdo faallooyinka. Haddii wax sidan oo kale ah la hirgelin karo, in markay kugu jawaabaan maqaal aad ka booddo ogeysiis ama aad haysato meel yar oo aad ku aragto inay jawaab ka bixiyeen iyo in kale.
Waa fikrad uun.
Ma jecli Disqus, waxay u beddeleysaa bog kasta shabakad bulsheed (runtiina waa fikradda abuureyaasheeda) iyadoo ka qaadaysa halista
Aniga sidoo kale. Sidoo kale, waa inaan galiyaa Disqus si aan wax uga ogaado faallooyin kasta isla marka la daabaco barta ... Ma aqaano, waxay igu kalifaysaa walaac.
Ma dhahayo Disqus waa la hirgaliyay, laakiin waa wax kuu sheegaya haddii ay kuugu jawaabeen qoraal hore, ugu yaraan kuwa naga diiwaangashan.
By the way, waxaan jeclaaday avatarka cusub sida G +.
Waan necbahay iyaga, laakiin iyagu waa uun dhadhamiya
Ma aanan jeclayn iyaga, buskudkeygu uma muuqdo mid wanaagsan.
Jawaab celin yar, markaan faallooyinka ka tago waxay dhahdaa [b] maamul [b /] diiwaan gelintayda
Ku jawaab googlemaster
Gacaliye Elav iyo Gaara:
Waxaan kuugu hambalyeynayaa horumarka mashruuca iyada oo ay ugu wacan tahay ku biirista aynu adeegsanno Linux. Waxaan la socdaa iyaga bilowgii, laba sano ka hor, markii ay kuwayagii wax faalinayey ay yaraayeen oo Geesinimadu u heellanayd inay ku dhex muquuniso "vibes wanaagsan" (ka hor intaan la gudbin oo la mamnuucin).
Waxaan rajeynayaa inay sii wadi doonaan goosashada guulaha.
Habsiin aad u weyn,
Waan kugu hambalyeynayaa, runtii waan jeclahay "wajiga" cusub ee aad gelisay baloogga, intaas ka sokow fikradda midowga waxay ahayd mid aad u wanaagsan maxaa yeelay FromLinux iyo UsemosLinux labaduba aad ayey u fiican yihiin, iyo, dhinaca kale, waxaa jira kuwo aad u badan blog badan oo Linux ah oo ka hadlaya isla; waxa ka sii daran, waxaa jira qaar blog dhisa oo kaliya koobiyeeya oo dhajiya waxa dadka kale daabacaan.
Hambalyo mar labaad, horeyna u soco, baydalka birta dhig.
Iyo, @Elav, sidaad arki doonto, waxaan isticmaalayaa Debian markaan aqriyay waxna aqriyey waxbadan waxaan horey uhelay dariiq uusan laptop ka udgooneyn "moss" marki lagu rakibey ... hahaha
Waoo laba bog oo adag ayaa la isku daray waa wax aan ereyo lahayn!
Aad u fiican, waxaan u maleynayaa inay fiicantahay. Hadal la'aan, waan faraxsanahay. Waxaan ahay mid raacsan labadaba. Heer sare
Ku jawaab satanAG
Hambalyo badan oo ku saabsan horumarka ka socda goobta, waa wax laga xumaado in meelaha maadada lagu qoro ay yaryihiin, laakiin waxaan ognahay in tayada wax soo saarku haba yaraatee aan hoos loo dhigi doonin, taa bedelkeedana wuu sii kordhayaa maxaa yeelay labada goobood waa kuwo aan caadi ahayn . Salaan ka timid Uruguay
Ku jawaab nec0r0bra
Wao! Waan jeclahay naqshadan cusub waxay umuuqataa mid nadiif ah .. Shaqo fiican!
AAA MICROSFTTTT TIEMBLA DESDELINUX GROWS AND GROWS MARKII AAD KA AQOONSATO WAA KUU CUNI DOONAA !, Lol iska kaftamaya, idinka seddex (elav, kaze and pablo) ayaa si kedis ah iiga qaaday, ma aanan booqan labada bog tan iyo usbuucii hore aniga iyo aniga tan raadso, oo si fiican baan u dareemayaa xoogaa xun maxaa yeelay ma sii ahaan doonto wixii shalay dhacay in la arko waxa ku cusub labada bog ee uu mid aad u jecel yahay, laakiin sidoo kale inaan fahmo in Pablo ay wajahayaan waxyaabo badan, cusub iyo haddii aan ku sii socday jihadaas, markaa waxay u egtahay inay ku dhammaan doonto sida baloogyada kale ee dhintay. Wiilashu way faraxsan yihiin, sida ay fikraddu u xun tahay, laba shay oo keliya ayaa maskaxdayda maanka ku haya:
1) astaanta sida aynu u adeegsano Linux farshaxankeeduna ma lumi doono, sax?
2) macaamil ganacsi ee ay ku sameeyeen aan isticmaalno Linux wuxuu lamid ahaa markii biil doorka ay ka iibsadeen homer simpson ganacsigiisa boqorka internet-ka (waad ogtahay wax walba iyo xafiisku masiibo 🙂)?
Hagaag waad mahadsantahay oo horay usoco, isbadal
In cabbaar ah ayaan moodayay inaan haysto baloog qaldan 😛 laakiin waxaan arkaa warka wanaagsan, waana jeclahay !!
Kala-guurkaaga waxaa loo sameeyay inuu sugo ilaa shalay ma aanan geli karin bogga, laakiin waa inaan wax kugu idhaa @elav, @ KZKG ^ Gaara ... mawduucan MOLA A HANDOS FULL.
Mawduuc aad u wanaagsan oo loogu talagalay blogga, aad u nadiif ah oo laga bilaabo 1024 × 768 wuxuu umuuqdaa mid qumman, midab aad u wanaagsan oo midab leh, waan kugu hambalyeynayaa shaqadaada.
hahahaha mahadsanid saaxiib, waqti aan aqrin
Dhammaantiin waan ku hambalyeynayaa, baloogyo mideysan oo cajiib ah, marwalba waan aqriyaa aan adeegsanno linux laakiin waxbadan kamaan faalloon dhinacyadaas.
Runtii hambalyo, mideynta maahan wax caadi ka ah adduunka Linux.
Way fiicantahay in la helo labadayda blog ee aan jeclahay.
Waxaan kuu rajeynayaa guul guul mashruucan cusub.
Salaan ka timid Mexico
Ku jawaab gonzalojpv
Waan jeclaa. Aad u fiican. Iyo avatars wareega ah waa kuwo cajiib ah. HAMBALYO !!!!!!
Dabaylaha, way ii fududahay inaan soo galo, waxay aadaan dhowr jeer oo aan maanta galo dhibaato la'aan, ma fahmin sababta aan si lama filaan ah u awoodi waayey, mararka qaarkood.
Naqshadda cusubi waxay umuuqataa mid aad u wanaagsan.
Runtii waan jeclahay qaabka cusub +1
sida dhaliil ahaan aniga waxay ila tahay in 1 mawduuc (maqaal, xusuus iwm) shabag walba ama wax alla wixii loogu yeero ay ka fiicnaan lahaayeen. tan iyo markii aan ogaaday in markaan dhigayo 2 mawduucyada qaarkood sawirrada la qalloocinayo
Hagaag, waxay ila tahay wax weyn! marka hore hambalyo naqshadeynta, aad u qurux badan.
Soo dhaweynta labaad waa Pablo Castagnino iyo dhamaan bulshada ku nool Aan isticmaalno Linux, waa inaan xasuusnaano in midnimadu ay tahay xoog, hambalyo!
Ma arag blogka in mudo ah waxaana layaabay isbedelka muuqaalka. Wax aan aad u jeclahay ayaa ah in qoraaga magaciisa qoraal uu ku muuqdo bilowga.
Astaanta ayaa i xasuusinaysa Xfce!
Waxa kaliya ee aan ogaado waa inay qaadato waqti dheer in la galo oo la dhex maro mowduucyada, waxaan leeyahay internet xawaare sare leh.
Haa, waan ka shaqeyneynaa. Marka horeba, dhibaatada ugu weyni waxay tahay in sawirada kujira bogga ugu weyn aysan adeecin cabir sax ah, taasi waa, dulucdu waxay qaadaneysaa sawirka asalka ah (miisaankiisa iyo xajmigiisa) weyna yareysaa.
Waxaan mar kale nadiifinaynay oo nadiifinaynay kaydka goobta, tani waxay ka dhigaysaa markii aad soo gasho mawduuc (markii ugu horreysay) way ka gaabinaysaa sidii caadiga ahayd, laakiin markaa waqtiyada soo socda aad ayey u dhakhso badan tahay.
Had iyo jeer waa gaabis, had iyo jeer?
Waan jeclahay isugeyntaan, waa mashruuc weyn.
Waa hagaag aan sugno oo aan aragno waxa ku dhacaya isbeddelka, waxaan ku leeyahay koontada 'identi.ca' oo u dhaqaaqday pump.io oo ay dhibaatooyinkeedu lahaayeen
Midabyo heer sare ah iyo naqshad qurux badan.
Hambalyo wiilasha .. Tani waxay ahayd mid cajiib ah 😀
Hagaag, waxaan rajaynayaa in tartamada loogu talagalay desktop-ka ugufiican bisha la sii wado in la qabto (hindise aad u xiiso badan oo runtii aan ugu riyaaqay usemoslinux) oo dadka oo kale ah aan u ogolaado inay kaqeybqaataan shabakadaha bulshada.
Dabcan, dhammaan guulahaas, fikradaha waaweyn ee Pablo dhaqan geliyay UsemosLinux halkan ayuu kasii socon doonaa 🙂
Shaki kuma jiro in iskudhafkan uu yahay midka udhaxeeya vegueta iyo goku, kan ugu xoogan. Laba baloogyo waaweyn, oo raadinaya horumarin labadaba, ayaa go'aansaday tan waxayna umuuqataa mid aad ugu habboon, in lagu biiro xoogagga si loo fuliyo ujeeddo ka weyn. Talaabada ugu horeysa waa mida adag oo iyagu horey ayey uqaateen, marka waxa soo socdaa waa guullo.
Waxaan raacay labada baloog muddo dheer, labadaba waxbaan ka bartay, imikana way midoobeen, iyagoo ilaalinaya midka ugu fiican, waxay u dhowdahay riyo rumowday.
Markaad aragto shaqooyin badan oo la dhexdhigay, waxay dhiirigalinaysaa akhristaha kasta, tani shaki la’aan waxay ku socotaa garabka garabka iyadoo la raadinayo bulshada Linux, iyagu waa kuwa ugu fiican.
Isku duubni iyo bogaadin.
kalluunka baloo dijo
Waxaan kuugu hambalyeynayaa cusboonaysiinta iyo ku darista baloogyada!
Ku jawaab pezbaloo
Hambalyo Elav, Pablo iyo kuwa kale ee la shaqeeya! Waxaan rajeynayaa in waxyaabaha cusub ee ku soo kordhay fiyuus-blog ay ku siinayaan miro badan! Ma farxad baa! Xoog badan iyo geesinimo!
Hambalyo diiran tan iyo wixii ka dambeeya, pablo iyo la shaqeeyayaasha kale! Dhiirrigelin badan ayaa ku jirta mashruucan cusub ee xiisaha leh! Waa maxay shucuurta! xD
Pd: waxay umuuqataa in iskudhafka sifiican loo qaabilay guud ahaan 😉
Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ragga ka soo jeeda desdelinux, ee ka yimid meel yar, sida ujeedooyinkooda hooseeya, u noqday boggan tixraaca ee ay tahay maanta.
Iyo wax aan la dhihi waxaan qabaa, taasi waa ... (mee geesinimada-geesinimada leh !!)
Mid: dunida GNU / Linux iyo barnaamijyadeeda, si kasta oo ay caqli u leeyihiin, waa inay bartaan ama tan u qaataan tusaale ahaan, taas oo lid ku ah jajabka caadiga ah ee mashaariicda. Waxaan ka hadlayaa UNIT.
Farxiyahow niman yahow !! ee cutubka !!
Wow, marka hambalyo ku biirista. Waa inaan idhaahdaa waan ku faraxsanahay fikrada, waana jeclaaday mawduucan cusub 🙂 (taas oo markaa jirta, ay hagaajiyeen tafaasiil badan iyo khaladaad kii hore oo ay sifiican ugu muuqato taleefankayga gacanta). Waxaan rajaynayaa inay tani sii socoto oo ay sii kororto oo ay tahay midow faa'iido badan leh 😀
War war !!! Waxaan rajeynayaa in mashruucan cusubi uu si habsami leh u socdo 😉
Midabku waa fiican yahay, guul waligiisba!
Ku jawaab mnlmdn
* Waxaan ku ordayaa wareegyo farxad *
* Goor dambe, tani waxay leedahay maalmo mana ogi xitaa *
sayidka saron dijo
In kasta oo maaddadu aysan foolxumo ahayn, haddana waxaan u arkaa inay tahay maadooyin ka raaxo badan oo ay ku taal boosteejo taagan oo aad wax badan ka sii akhriyi karto maaddada laga hadlayo.
Jawaab sayid sabaaron
Iyo markale, hambalyo !! _ ^
Bilowgii Vargas J. dijo
saaxiibo aad u fiican ... Waxaan u maleynayaa in balooggan uu yahay mid aad u fiican oo aan sidoo kale u isticmaalno Linux, way fiicantahay inay isku milmeen
Jawaab ku samee Genesis Vargas J.
Naqshad aad u fiican iyo isugeyntu waxay umuuqataa xulasho xigmad leh. Nasiib darrose waxaa jira baloogyo badan oo ku saabsan luuqadda Isbaanishka oo u eg isku midabbo midba midka kale. Maaddaama Linux ka duwan tahay oo ku biirista Aan Isticmaalno Linux waxay kaliya u horseedi kartaa kororka tayada horeba u laheyd waxa la daabacay.
Salaan ka timid dhinaca kale ee balliga.
Waad ku mahadsantahay faalladaada, runtii.
Ku laabo Linux ... la Funtoo!